National Power News:: आइतबारको विदेशी मुद्राको विनिमयदर : अमेरीकी डलरदेखि कुवेती दिनारसम्मको कति छ ? National Power News:: आइतबारको विदेशी मुद्राको विनिमयदर : अमेरीकी डलरदेखि कुवेती दिनारसम्मको कति छ ?
आइतबारको विदेशी मुद्राको विनिमयदर : अमेरीकी डलरदेखि कुवेती दिनारसम्मको कति छ ?
Sunday, June 24, 2018 National Power
काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारको लागि एक अमेरीकी डलरको खरिददर १०८.२४ रुपैयाँ र बिक्रीदर १०८.८४ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै युरोपियन एक युरोको खरिददर १२५.९९ रुपैयाँ र बिक्रीदर १२६.६८ रुपैयाँ रहेको छ । एक युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर १४३.७६ रुपैयाँ छ भने बिक्रीदर १४४.५६ रुपैयाँ रहेको छ ।
साउदी अरेबियन एक रियालको खरिददर २८.८६ रुपैयाँ र बिक्रीदर २९.०२ रुपैयाँ रहेको छ । कतारी एक रियालको खरिददर २९.७३ रुपैयाँ र बिक्रीदर २९.८९ रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै युएइ एक दिहरामको खरिददर २९.४७ रुपैयाँ छ भने बिक्रीदर २९.६३ रुपैयाँ रहेको छ । मलेसियन एक रिङ्गिटको खरिददर २७.०४ रुपैयाँ र बिक्रीदर २७.१९ रुपैयाँ छ ।
यसैगरी जापानीज १० यनको खरिददर ९.८३ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९.८८ रुपैयाँ छ । कुवेती एक दिनारको खरिददर ३५७.७ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३५९.७५ रुपैयाँ रहेको छ ।